Uhlobo lwe-Oasis VS yohlobo lohambo, ii-eReaders ezimbini ezilungileyo kwimarike ubuso ngobuso | Zonke iReaders
I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ezona zi-eReaders zintle kwintengiso yobuso
IiVillamandos | | Amazon Kindle, I-eReaders
Izolo iAmazon yazisa ngokusesikweni entsha Uhlobo lwe-Oasis e-reader ene ...Uhlobo lweOasis»/], i-eReader entsha ephezulu ekumila kuyilo oluphuculweyo, ngokubhekisele kwisandulela sayo, i Kindle Voyage e-reader, ...Uhlobo lohambo»/] Kwaye ngokugcina izinto zihambelane nezinto ezinikezwe luhlobo lwangaphambili, olwaluyindawo ephambili yenkampani ekhokelwa nguJeff Bezos. Emva kokuyihlalutya izolo, emva kokukwazi ukuyivavanya okwemizuzu embalwa kumnyhadala esasimenywe kuwo yiAmazon Spain, namhlanje asinakuphulukana nethuba lokujongana nalo ngaphambili kunye nokuthelekisa Uhlobo lwePhepha elimhlophe -...Uhlobo lwe-Paperwhite »/], esinokuthi ngumntakwabo omncinci.
Namhlanje nakweli nqaku Siza kuthelekisa ngeenkcukacha ezintle iOle Kindle Oasis kunye nohambo lohlobo, Ngaphandle kokulibala njengoko besitshilo malunga ne-Kindle Paperwhite. Mhlawumbi umahluko awuninzi kakhulu, kodwa kubalulekile kwaye nangona ekuboneni kuqala kubonakala ngathi zintathu izixhobo ezifanayo ngasemva zahluke kakhulu, ukuqala kuyilo kunye nokuphela kwexabiso labo.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba i-Kindle Oasis entsha, i-Kindle Voyage kunye ne-Kindle Paperwhite ziyafana, qhubeka ufunda ngononophelo kuba ngeli nqaku uyakufumanisa, kungekuphela malunga noku, kodwa nangezinye izinto ezininzi esikholelwa ukuba zingaba zezakho Unomdla ngokwenene ukuba ucinga, umzekelo, ukuthenga i-eReader entsha, ukungena kwihlabathi lokufunda ledijithali okanye ukutshintsha isixhobo onaso ngoku.
Ngaphambi kokuthelekisa isikrini sayo, ixabiso layo okanye izibonelelo zayo kwiinkalo ezahlukeneyo, siza kwenza uphononongo olupheleleyo lweempawu zayo eziphambili kunye nokubalulwa, ukuze sonke sizifumane kwaye sazi ngokucacileyo ukuba loluphi na uhlobo luni olusinika lona.
1 Iimpawu zoHambo loHlobo kunye neNkcazo
2 Iimpawu zohlobo lweOasis kunye nokucaciswa
3 Iimpawu zohlobo lwePhepha kunye neenkcukacha
4 Uyilo; inyathelo elinye ukubuya uqhubeke ukuphucula
5 Isikrini; sukuzikhangela kuba akukho mahluko
6 Ngaba ityala elitsha le-Kindle Oasis, liyimfuneko kwaye lanele njengeliveli?
7 Ixabiso; umahluko omkhulu
8 I-Kidle Oasis, iphumelele le duel ngaphandle kweempikiswano ezininzi
Iimpawu zoHambo loHlobo kunye neNkcazo
Iscreen: sidibanisa isikrini esine-intshi ezi-6 kunye nonobumba we-e-papper iteknoloji, ukuchukumisa, ngesisombululo se-1440 x 1080 kunye nee-pixels ezingama-300 nge-intshi nganye
Imilinganiselo: 162 x 115 x 76 mm
Yenziwe ngemagnesium emnyama
Ubunzima: Uhlobo lweWiFi iigram ezili-180 kunye neegram eziyi-188 inguqulelo ye-WiFi + 3G
Imemori yangaphakathi: i-4 GB ekuvumela ukuba ugcine ii-eBooks ezingaphezulu kwama-2.000, nangona oko kuya kuxhomekeka kubungakanani bencwadi nganye nganye.
Unxibelelwano: WiFi kunye noqhagamshelo lwe-3G okanye iWiFi kuphela
Iifomathi ezixhaswayo: Uhlobo lwefomathi 8 (AZW3), i-Kindle (AZW), i-TXT, i-PDF, i-MOBI kunye ne-PRC engakhuselekanga kwifomathi yabo yoqobo; I-HTML, iDOC, iDOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP ngokuguqula
Umahluko wesikrini esiphakamileyo oya kuthi usivumele ukuba sifunde ngendlela ebhetyebhetye kwaye emnandi
Ukubonisa isisombululo esiphakamileyo se-300 dpi: kufundwa njengephepha, ngaphandle kwelitha, nakwilanga elikhanyayo.
Ukukhanya okuzilawulayo kwangaphambili okunika inqanaba elifanelekileyo lokuqaqamba imini nobusuku; funda kakuhle iiyure.
Indawo yokujika iphepha ikuvumela ukuba utshintshe amaphepha ngaphandle kokuphakamisa umnwe.
Funda kangangoko ufuna. Kwityala elinye, ibhetri ihlala iiveki, hayi iiyure.
Ikhathalogu ebanzi yee-eBooks ngamaxabiso asezantsi: ngaphezulu kwe-100 yee-eBooks ngeSpanish ngexabiso elingaphantsi kwe- € 000.
Iimpawu zohlobo lweOasis kunye nokucaciswa
Umboniso: ubandakanya isikrini esibambe-intshi esi-6 kunye netekhnoloji yePhepha eline-E Ink Carta ™ kunye nokukhanya okuhlanganisiweyo kokufunda, i-300 dpi, itekhnoloji yefonti elungiselelwe, kunye nezikali ezili-16 ezingwevu
Imilinganiselo: 143 x 122 x 3.4-8.5 mm
Yenziwe kwindlu yeplastiki, enesakhelo sepolymer ethe yafakwa kwinkqubo yokuqiniswa
Ubunzima: Uhlobo lwe-WiFi 131/128 iigram kunye ne-1133/240 igrem inguqulo ye-WiFi + 3G (Ubunzima buboniswa kuqala ngaphandle kwekhava kwaye okwesibini buqhotyoshelwe)
Iifomathi ezixhaswayo: Ifomathi ye-8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI engakhuselekanga, PRC ngokwendalo; I-HTML, iDOC, iDOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP ngokuguqula
Uhlobo lwe-Oasis e-reader ene ...
Uhlobo lwethu olucekeceke nolulula; funda kakuhle iiyure.
Uyilo lweqhosha le-Ergonomic lokujika kwiphepha elingenamzamo.
Uhlobo olunokuzimela okukhulu. Ityala lesikhumba kunye nebhetri ehlanganisiweyo linokwandisa ubomi bebhetri lefowuni ngeenyanga ezininzi.
Khetha umbala wekhava elisuswayo: mnyama, burgundy okanye walnut.
Isiboniso esiphakamileyo se-300 dpi-sifundeka njengephepha eliprintiweyo.
Iimpawu zohlobo lwePhepha kunye neenkcukacha
Umboniso: ubandakanya isikrini esine-intshi ezi-6 kunye nobuchwephesha obunobumba be-e-iphepha kunye nokukhanya okuhlanganisiweyo kokufunda, i-300 dpi, itekhnoloji yefonti elungiselelwe kunye nezikali ezili-16 ezingwevu
Imilinganiselo: 169 x 117 x 9.1 mm
Ubunzima: Uhlobo lweWiFi iigram ezili-205 kunye neegram eziyi-217 inguqulelo ye-WiFi + 3G
Ibhetri: IAmazon iqinisekisa ukuba ngentlawulo enye yesixhobo singakonwabela ukufunda iiveki ezi-6.
Uhlobo lwePhepha elimhlophe -...
Ukuzilawula okwakhelweyo ngaphakathi: ukufunda imini nobusuku.
Yonwabela ukuthanda kwakho ukufunda ngaphandle kwezilumkiso nge-imeyile okanye izaziso.
Uyilo; inyathelo elinye ukubuya uqhubeke ukuphucula
Ngokufika kwintengiso kunyaka ophelileyo wohambo lohlobo, iAmazon ifuna ukusinika isixhobo esinamandla amakhulu, iinkcukacha ezithile ezinomdla, kodwa ngaphezulu kwako konke kuyilo lwePrimiyamu kwaye luzele bubuhle. Yenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, ngokubamba nje ngesandla sakho uyaqonda ukuba awukho phambi kwaso nasiphi na isixhobo.
Nangona kunjalo, Ngokufika kwe-Kindle Oasis kwintengiso, inkampani ekhokelwa nguJeff Bezos kubonakala ngathi ithathe isigqibo sokubuyela umva, ukuze ihambele kwelinye icala., ngokucacileyo enomdla ngakumbi. Kule Kindle intsha, ipulasitiki ekumgangatho ophezulu iphinda iphinde ibe ngoyena mntu uphambili, ukuze sikwazi ukusinika isixhobo sobukhulu obuncinci kwaye ngaphezulu kwako konke ngobunzima obusezantsi kakhulu.
Ukongeza, iplastikhi ekwakhiwe ngayo olu hlobo lutsha khange isinike mvakalelo imbi kwaye ukunciphisa ubunzima kuthakazelelwa kakhulu. Njengoko sele sibonile, siye saya kwi-188 yeegram ukuba uhambo lohlobo lilinganisela kwi-131 gram nje ukuba i-New Kindle Oasis inobunzima.
Ukufakwa kwetyala, kunye nebhetri eyakhelweyo, yenye yamandla e-Kindle Oasis, apho izixhobo ezisemgangathweni ezisetyenzisiweyo kuhambo lohlobo azange zisetyenziswe, kodwa zitshintshiwe ukuze zisinike ezinye izinto ezininzi, ezibangela umdla ngakumbi, okanye ubuncinci sicinga njalo.
Ngokubhekisele kuyilo, sinokuthi i-Kindle Paperwhite ishiya inyathelo elinye emva kwe-Kindle Oasis kunye nohambo lohlobo, nangona ngethamsanqa uninzi lwabafundi lungakhathali kuyilo lwangaphandle lwesixhobo kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu ziimpawu ezinikezela ngaphakathi.
Isikrini; sukuzikhangela kuba akukho mahluko
Ukuba besinokubeka i-Kindle ezintathu etafileni size sizivule, kwiscreen sayo sinokufumana ukufana okuninzi kwaye umahluko umncinci kakhulu. Kwaye zezikrini ze-Kindle Oasis, i-Kindle Voyage kunye ne-Kindle Paperwhite ezilinganayo, zisebenzisa itekhnoloji efanayo kwaye zinesisombululo esifanayo seepikseli nge-intshi.
Olunye lokwahluka okumbalwa esiza kukufumana mhlawumbi kukukhanya kwaye kukuba i-Kindle Oasis ifikelele kwintengiso ngokuqhayisa ngokusinika ukukhanya okukhulu, nakwiimeko eziphantsi zokukhanya. Eli candelo lokwahlula ubukhulu becala liphulukana nokubaluleka kwalo sisazi ukuba ezi zixhobo zintathu zidibanise ukukhanya okusivumela ukuba sifunde, ngaphandle kobunzima kwaye ngaphandle kokushiya amehlo ethu kumzamo, kwiimeko zobumnyama obupheleleyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, isikrini asizukuba ngumahluko osenza sixhomekeke ekuthengeni esinye okanye esinye isixhobo kwaye ezo zinto zontathu ziyafana kwaye zahlukile kwiinkcukacha ezincinci ngaphandle kokubaluleka kakhulu.
Ngaba ityala elitsha le-Kindle Oasis, liyimfuneko kwaye lanele njengeliveli?
Kwiintsuku bekuvakala ukuba kungenzeka ukuba Uhlobo olutsha luya kubandakanya imeko apho ibhetri yangaphandle yeyona iphambili kuyo. Eli tyala singathi yenye yomahluko omkhulu we-Kindle Oasis entsha ngokubhekisele kuhambo lwe-Kindloe kwaye ngokubanzi ngokubhekisele kuyo nayiphi na i-eReader enesitywina seAmazon.
Kuxhomekeka kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye, kunokuba yintsikelelo yokwenyani, nangona ndisoyika kakhulu ukuba bambalwa abasebenzisi abazakuyisebenzisa kwaye kukuba ibhetri ye-eReader sele isinike ukuzimela okukhulu kwaye ndiyakholelwa ukuba akuyomfuneko oku Uhlobo olutsha, kwaye alwanelanga ukuba ungumahluko omkhulu ngokubhekisele kwinto eyandulelayo.
Ukongeza, akufuneki silibale ukuba olu hlobo lutsha lusinika ukutshaja ngokukhawuleza, okuvumela ukuba ibhetri yesixhobo ihlawulwe kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha. Ngaba ukhona umntu onengqondo kwi-eReader eya kwimeko enebhetri eyakhelweyo?.
Ixabiso; umahluko omkhulu
El Uhlobo lohambo beze emarikeni ngexabiso elothuse ngaphezu kwesinye, kuba uninzi lwethu sinee-eReaders njengezixhobo ezinexabiso elingaphezulu okanye elingaphantsi kwesiqhelo kwaye sinokufumaneka kuye nawuphi na umsebenzisi. IAmazon iyithethelele ngokuthi sijamelene nencwadi ene-elektroniki ephezulu, eyenziwe ngezinto zePrimiyamu kwaye isinike izinto kunye nezinto esingenakuba nazo kwesinye isixhobo solu hlobo. Ngelo xesha Esi sixhobo sinokuthengwa nge-euro ezingama-189.99.
Inkampani eyalelwe nguJeff Bezos iyaqhubeka nokugcina ikhathalogu yayo i-Basic Kindle kunye ne-Kindle Paperwhite, enokuthengwa nge-euro ezingama-79.99 kunye nee-euro ezili-129.99 ngokwahlukeneyo.
Ukuqaliswa kohambo lohlobo aluhambanga kakuhle kwivenkile enkulu ekwi-Intanethi kwaye ngaphandle kweengxaki zesitokhwe sokuqala, ukuthengisa kwakhawuleza kwavelisa amanani amahle. Inkqubo ye- Uhlobo lweOasis Oko kwakuthetha ukuqhubela phambili kwaye oko kukuba ixabiso lalo liphezulu kunolo luhambo lohlobo, ngaphandle, njengoko sibonile, zisinika izinto ezininzi. Okwangoku esi sixhobo inokuthengwa kwimarike ye-289.99 euro, ixabiso elithintelwe ngokupheleleyo kwinani elikhulu labasebenzisi abangakhange baqwalasele nokuba kunokwenzeka ukuchitha sisixa semali kwincwadi ye-elektroniki, abanokuthi bayisebenzise ukonwabela ukufunda kwidijithali.
Umahluko wamaxabiso phakathi kwezi zixhobo zintathu ubaluleke kakhulu kwaye namhlanje kunzima ukufumana abasebenzisi abaninzi abazimisele ukutyala imali ephantse ibe ngama-300 euros kwiReader. Ewe kunjalo, ngokwenza njalo siya kuba nohlobo loyilo lweprimiyamu kunye neempawu ezithandekayo kunye nokubalulwa.
Ukuba sityekele ekusebenziseni imali encinci, nge-129.99 ye-euro ethi i-Kindle Paperwhite ixabisekile, siya kuba nohlobo oluhle kakhulu oluya kusivumela ukuba sikonwabele ukufundwa kwidijithali, ethi yona emva kwayo yonke ibe yinjongo ngokuthenga i-eReader. Uyilo esinokuthi ngalo, yinto yesibini.
Umahluko kwixabiso liphezulu; Ngaba kuninzi kakhulu kuyilo kunye nokusebenza kangangokuba kufuneka uhlawule lo mahluko?.
I-Kidle Oasis, iphumelele le duel ngaphandle kweempikiswano ezininzi
Kuyinyani ukuba iAmazon ikwazile ukwenza iO Kindle Oasis inobunzima obusezantsi kakhulu kunye noyilo oluphuculweyo, kubandakanya imeko entsha esinika idosi eyongezelelweyo yebhetri, kodwa kulapho sinokuthi iindaba zifikile. Ukuba uLuhlobo loHambo belingu-1.0 yesixhobo, le Oasis yohlobo ndicinga ukuba inokuba yi-1.2 ngaphandle kweengxaki, xa sonke besilindele ukuba ibe yi-2.0 eneendaba ezibalulekileyo.
I-Kindle Oasis entsha iphumelele le duel ukuya kwisithathu, nangona ngaphandle kweempikiswano ezininzi kwaye ngexabiso elonyuke ngokungabikho nto kwaye akukho nto ingaphantsi kwe-100 ye-euro ngokuthelekiswa nohambo lohlobo. Sonke besilindele okungakumbi kuhlobo olutsha kwaye luza kubandakanya izinto ezintsha hayi imeko nje ebhetri eyakhelweyo. Eli tyala linokuba luncedo kakhulu kwi-smartphone enobomi bebhetri obufutshane, kodwa kwi-eReader enebhetri yayo enokuhlala iiveki ezininzi andiyiboni ingqiqo okanye ukuba luncedo.
Kwi-duel engqongqo ophumeleleyo uya kuba yi-Kindle Oasis njengoko besitshilo, kodwa ukuba sijonga ixabiso kwaye ikakhulu sijonga le nto siyifunayo kwi-eReader, mhlawumbi kwakhona ophumeleleyo uya kuba ngu-Kindle Paperwhite, olunge kakhulu kwimbali enexabiso elimangalisayo.
Ngubani ophumeleleyo kwi-duel phakathi kwe-Kindle Oasis entsha, i-Kindle Voyage kunye ne-Kindle Paperwhite yakho?. Ungasitshela uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post, kwiforum yethu okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona kwaye sikulungele ukuxoxa ngale nto okanye nasiphi na esinye isihloko kunye nawe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » I-Kindle Oasis VS Kindle Voyage, ezona zi-eReaders zintle kwintengiso yobuso
Ewe ndaphoxeka, ndilinde ixesha elide ukuba isiphelo siguqulelwe kutshintsho olulula, ngokoluvo lwam alunomtsalane njengohambo.
ixabiso libonakala ligeza kum.
akukho processor entsha, akukho screen siphuculweyo, akukho inki umbala, njl
Sisekhona kwi-Middle Ages yabafundi, ngaba ikhona inkampani enesibindi sokuthatha inyathelo eliya kwi-Renaissance and Modernity?
Iphi iprosesa edumileyo ye-imx7 efihliweyo, apho isikrini sinemibala, nokuba icinyiwe, apho ihlawuliswa ngamandla elanga, ...
Ukutsiba okusemgangathweni kuya kufuneka kuvele kwenye inkampani, hayi kwi-amazon
Ndingathanda ukuzama i-Oasis. Ndiqinisekile ukuba kukhululekile ukubamba ngesandla esinye. Malunga noku, ndivuyisana neAmazon yoyilo lwesixhobo. Andithandabuzi ukuba kuya kuba mnandi kangakanani ukucofa amaqhosha omzimba, ngokuqinisekileyo kulula kodwa ndiya kuhlala ndizibuza ukuba kutheni kungekho mntu uxelise ivili elincinci elalinayo iPapyre 5.1 endala. Andizange ndibone nantoni na ethe kratya ukujika iphepha elibambe isixhobo ngesandla esinye.
Ixabiso liyandicaphukisa. Ibiza kakhulu. Ndicinga ukuba inyani yokubandakanya ikhava inento (eninzi) yokwenza ngayo. Umbuzo ngulo, kutheni le nto beyifaka, ngaloo ndlela benyusa ixabiso lesixhobo, endaweni yokuba basinike ngokwahlukileyo njengomphelelisi? Andihlali ndisebenzisa ityala kuba benza ukuba isixhobo sibonakale sibi (hayi kule nto, intle kakhulu) kwaye bonyusa ubunzima kakhulu ngenxa yoko andiqondi apha ukuba kutheni iAmazon ithathe isigqibo sokuyifaka. Izizathu zabo ziya kuba nazo.
Kulunge kakhulu ukuba ikhava ibonelela ngokuzimela ngakumbi kodwa ndicinga ukuba ukuqhubela phambili okugqibeleleyo kuya kwenzeka mhla bafaka eyabo ipaneli yelanga kwaye bayenze ukuba ezimeleyo kumbane wombane. Kancinci okutyiwa ngabafundi ndicinga ukuba yinto enokwenzeka. Ndicinga ukuba ukuba abayenzanga, kungenxa yoyilo oluthile okanye ubunzima okanye ingxaki yexabiso. Andazi.
Njengoko usitsho kwinqaku, umahluko yile: ukukhanya kwesixhobo uqobo, ukuzimela ngakumbi (kunye nesembozo), ikhava ifakiwe, uyilo olungcono kunye nokukhanya okungcono. Ngaba kwanele ukuthethelela umahluko wexabiso? lowo ngumbuzo.
Okwangoku ndisahleli ne "KP2" yam endala.
Umcimbi we-Kindle Oasis kunye netyala kukuba kubonakala ngathi ngaphandle kwebhetri yetyala i-auntonomy yohlobo ayidluli iiveki ezimbalwa. Kwaye kungenxa yokuba iAmazon ixhomekeke kwinyani yokuba uninzi lwabanini wenye yezi e-Readers bahlala beyiphatha netyala.
Ewe, kuphela phakathi kwabo bobabini uhambo, kuba andiboni kuphucuka okwenyani kwi-oasis. Kodwa ukuba kufuneka ndikhethe ophumeleleyo, kobo h2o ngokucacileyo iphumelele ngodaka lomhlaba njengomfundi ngokusebenza kakuhle kwimarike kunye neyona firmware ifundwayo kunye noqwalaselo. Nangona ine-dpi encinci. Ukuba ngumbuzo we-DPis kwaye uhlala ngo-6 "ophumeleleyo ngokucacileyo yi-kobo hd ngaphandle kwengxoxo ngomgangatho wexabiso.
Ndine-Kindle yesi-7 kunye neKobo Glo HD kwaye ndicela uxolo ukuba iGlo lisebenza kancinci xa kuthelekiswa ne-Kindle PaperWhite ekwanayo ne-300 dpi.
Ixabiso eligqithisileyo ngaphandle kokubonelela nangayiphi na into ebalulekileyo ebonakalayo. Ngu "ngaphezulu okufanayo" kodwa kuyabiza. Ukuphoxeka ngokupheleleyo. Inkqubela phambili kufuneka ihambisane nomgangatho wezikrini. Into yokuba umba wemvelaphi emhlophe iyonke kunye neeleta ezimnyama ezingafaniyo ayiconjululwanga ngokucacileyo ibonisa ukuba akukho ukuzibophelela kugqityiweyo kwinto entsha. Njengoko umntu esitsho; Sisekwi-Middle Ages yabaphambili.
Ndiyavumelana ngokupheleleyo nawe. Ndihlala ndisithi uEink kufuneka asebenze kuloo nto, umahluko. Imvelaphi emhlophe (ngoku efihliweyo kukukhanya okuhlangeneyo) kunye noonobumba abamnyama. Ndicinga ukuba bazakubonisa itekhnoloji entsha kwinyanga ezayo ... ukubona ukuba zeziphi iindaba abazifumanayo.
Ophumeleleyo ayilohambo okanye i-oasis. Ingumhlophe wephepha.
Andifuni ikhava nayo. Ukuba bayayithengisa yomile kwaye siyathetha. Nangona kunjalo, andiboni kuphuculwa ngaphezulu kwephepha lam elimhlophe.
Yandisa uRenart sitsho
Akukho namnye kubo "ngabafundi abagqwesileyo." Ukuba kukho nantoni na, zezona zilungileyo, "eziphezulu zoluhlu", kodwa zisetyenziselwa kuphela iAmazon. Ewe ndiyazi, ndiyalinganisa kwaye ndiyaguqula ... kodwa ... uthini ngeDrm? Andikwazi kwamkela njengokhetho olusemthethweni "ngokwakhona" into engekho mthethweni. Ukutsiba iDrm akufuneki, kuqala, kube lukhetho. Nanini na xa ndinako, ndithenga ngaphandle kweDrm, ukuba bendifuna uhlobo ndiza kuhamba ngephepha elimhlophe okanye elona lisisiseko ngaphandle kokukhanyisa, kuba ezi zinto zimbini zokudlala zibiza ixabiso elixhomileyo ngenxa yeenjongo ezenzelwe zona: ukufunda Wonder with esisiseko okanye nge-Bq Cervantes, ngamaxabiso afanelekileyo).
Phendula u-Enric Renart
UJerry Siegel sitsho
Enkosi ngenqaku lakho, lindincede kakhulu kukhetho
Ukuthenga uhambo 'oludala' ngo-2017?
Njengoko ndaye ndagqiba kwelokuba ndithenge i-Kindle entsha, ndatshayiswa luhambo olunenkangeleko encinci kunye nalo lonke uphononongo lwe-Oasis.
Ndithi icandelo le-MINIMALIST kwaye andithethi i-Oasis, kuyilo kunye nococeko lokujonga ukuba uhambo luhambo oluncinci kwi-e-reader.
Ngoku, ayisiyiyo loo nto kuphela. ngokwembono yetekhnoloji ibalasele kunayo yonke, inetekhnoloji ethe kratya kunaye nabani na. Amaqhosha othuli aphelelwe lixesha. Lixesha elidlulileyo. Ukuba imalunga nokusebenza, kunjalo, kuya kufuneka uthweswe isidanga soxinzelelo kwaye ubambe umnwe wakho kwaye ucinezele ukuguqula iphepha, ngempendulo ebambekayo efana neApple Watch.
BENZA UMSEBENZI kwaye abemi ngaphandle !!!
Uyilo oluya kwenziwa nguJonathan Ive. Amaqhosha angabonakali.
Kwaye izixhobo !!!
Amaqhosha esilivere nekhabhon, umzimba wemagniziyam vs iplastiki yentsimbi.
Kulungile, ngokobunzima. Ngamaqweqwe kunzima. Kwaye i-origami, eya kuba yinto enqabileyo, kodwa iyasebenza kwaye inika umnxeba waseJapan kuyo yonke.
I-ergonomics kwithiyori efanelekileyo ye-oasis ixhomekeke kwizandla onazo, i-Oasis inokuba nencinci kakhulu nangona isisombululo esinokubuyela umva sisonjululwe, kodwa inyanzela ukuba usoloko ufunda ngesandla esinye.
Kwimeko nayiphi na imeko lelona xabiso libalaseleyo ngokunxulumene noHambo loxande.
Ukuyijikeleza kakuhle ndingatsho ukuba uhambo luya kusetyenziswa ebhodini kwaye i-Oasis inokuyiphumelela xa kufundwa.
Kukho isisombululo, thenga i-SUV Voyage, kunye ne-Oasis yokufunda ebhedini (uyadlala).
Ngaba lolona hlobo luhle?
Olona hlobo luluhle luya kuba luhambo-ngamaqhosha alo angabonakaliyo- kunye nobukhulu kunye nobungakanani beOasis.
Ukujikeleza kwiisekethe akukubeki ngaphezulu kohambo, bubuhle bexesha elizayo kunye nohambo olubuyela emva ngexesha.
Kwaye enye into ... ukukhanya okuzenzekelayo kukuvuyisa ekufuneka kubekhona kuso nasiphi na isixhobo sexesha elizayo.
Ii-LEDs ezili-10 vs ii-6 zohambo lohambo azenzi mahluko, akukho zikhalazo malunga nokukhanya kunye nephepha elimhlophe eliqaqambileyo.
PRICE, uhambo no-Origami -ekuphela- € 50- zitshiphu. Ke lo ayingombandela.
I-Oasis enetekhnoloji yohambo yinto encinci enokuphuculwa.
Utshilo konke oku ngentlonipho 😉
Phendula kuJerry Siegel
Enkosi ngenqaku lakho, lindincede kakhulu kukhetho.
Kuxhomekeke kwizandla onazo, i-Oasis inokuba nencinci kakhulu nangona isisombululo esinokubuyela umva sisonjululwe, kodwa inyanzela ukuba uhlale ufunda ngesandla esinye.
Kukho isisombululo, thenga i-Voyage SUV, kunye ne-Oasis yokufunda ebhedini.
Kuya kufuneka ndithenge enye yokuzalwa kumfundi ofunda iphepha elibi, ungacebisa ntoni? Kuya kufuneka ndibukeke ndimhle kakhulu
Uhlobo lwe-Oasis vs Kobo Aura H2O, ukungqubana kwecolossi?
Iplagi entsha yongeza isicatshulwa kwintetho kwiCaliber